Musharrax Madaxweyne Eng,Maxamed Cali Maad oo Garowe lagu soo dhaweyey(Sawirro). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Musharrax Madaxweyne Eng,Maxamed Cali Maad oo Garowe lagu soo dhaweyey(Sawirro).
Musharrax Madaxweyne Eng,Maxamed Cali Maad oo Garowe lagu soo dhaweyey(Sawirro).
December 6, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garoowe (HM):- Murasharrax Eng,Maxamed Cali Maad oo kamid ah musharaixiinta utartamaya xilka madaxtinimada Dowladda Puntland doorashada 2019,musharax oo safar dhulka ah ku yimi magaalada ayaa waxaa soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada Caasimada Garoowe.
Eng, Cali Maad waxaa uu dadweynaha kula hadlay fagaaraha wayn ee bartamaha magaaladda (Barxadda) ayaa sheegay in ujeedka uu isu sharaxay ay tahay in uu u adeego bulshada puntland,iyadoo uu wax kaqabanayo sidii loo daradargelin lahaa adeegyada waxbarashada,Caafimaadka,Amniga iyo ganacsiga.
Eng,Maad waxaa uu xusay in Somaliland ay kusoo duushay dhul aanay lahayn,iyadoo marba mar meel qabsanaysay,ayna tahay dandaansi aan loo meel dayin,waxaana uu sheegay in uu talaabada ugu haboon uu ku wajihi doono colaadda Somaliland “Arinta Somaliland iyada qorshe sax ah ayaan kuwajihidonaa,dhanka dowladda dhexe waxaan la yeelandonaa shaqo kuhaboon faderalismka,kama mid ahaandoono Ururka Madaxda Dowlad goboleedyadda Soomaaliyeed”.Eng Cali Maad.